Apple dia manana ekipa miasa amin'ny rafitra fandidiana fiara | Vaovao IPhone
Apple dia manana injenieran'ny rindrambaiko am-polony any Canada hiasa amin'ny fananganana rafitra fiasa ho an'ny fiara.Hetsika tsy fahita firy ho an'ny orinasa iray izay matetika mikarakara tetik'asa fikarohana sy fampandrosoana eo akaikin'ny foiben'i Cupertino, Kalifornia, raha ny filazan'ny olona efa mahalala izany.
Maro amin'ireo injeniera miasa any Canada dia nokaramaina nandritra ny taona lasa ary manodidina ny roapolo eo ho eo dia avy amin'ny BlackBerry QNX Ltd., mpamatsy lozisialy automatique automatique. Nangataka izy ireo mba tsy ho fantatra mba hiady hevitra momba ny antsipirian'ny tetikasa miafina.
Miasa ao amin'ny biraon'ny Apple ao amin'ny manodidina an'i Ottawa any Kanata izao ireo injeniera, sahabo ho dimy minitra miala ny QNX. Apple dia nibanjina ireo mpiasan'ny QNX noho ny fahaizan'izy ireo amin'ny fampivelarana ireo singa manan-danja amin'ny rafitra fikirakirana sy ny fitantanana angovo, hoy ny tompon'andraikitra QNX teo aloha.
Ny karama nalaza indrindra tamin'ny QNX dia ny CEO, Dan Dodge. Hatramin'ny nidirany tao amin'ny tetikasan'ny Apple Titan an'i Apple tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nandray andraikitra lehibe kokoa izy nanara-maso ny rafitra fiasa ho an'ny fiara, nizara ny fotoanany teo amin'i Canada sy California, hoy ny vahoaka. Ny karama malaza iray hafa dia i Derrick Keefe, izay nandao ny QNX tamin'ny taon-dasa taorian'ny lehiben'ny injenieran'ny folo taona.
Ny rafitra fiasa fiara no ivon'ny lozisialy amin'ny sehatry ny fiara Apple ho avy, amin'ny fomba mitovy amin'ny iOS amin'ny iPhone. Ekipa Apple no mivoatra rindrambaiko tsy miankina izay hitarika fiara mitondra tena amin'ny ho avy ary hihazakazaka amin'ny rafitra fiasa izy io.
Ny rindrambaiko irery dia iray amin'ireo fiasa maro kasaina hatao ao amin'ny rafitry ny fiaran'ny fiara. Ohatra, ny injenieran'ny Apple sy ny fahitana an'ny efijery lozisialy mampiseho rindrambaiko toy ny sari-tany azo alain-tahaka amin'ny mpanampy nomerika (Siri) miorina amin'ny feo.
Ny fiafaran'ireo fiasa ireo dia miankina amin'ny torolàlana stratejika ankapobeny an'ny Project Titan. Bob Mansfield, izay naka ny tetikasa tamin'ny volana aprily, dia nanome injeniera fe-potoana iray hitsapana ny teknolojia mandeha irery alohan'ny hanapahana hevitra amin'ny dingana manaraka.
Ekipa hafa avy amin'ny tetik'asa Titan dia misy vondrona iray ho an'ny sehatra simulasi mitondra tena. Apple dia nanamboatra simulator virtoaly virtoaly izay ampiasain'izy ireo hizaha toetra lozisialy mitondra tena fa tsy manana ny rafitra amin'ny làlambe
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia manana ekipa any Canada miasa amin'ny rafitra fiasa ho an'ny fiara
Manitatra ny teknolojia kognitive "Watson" ho an'ny rindranasa iOS ao aminy i IBM